MASKUBA ABUR BUU DHALAA!!!
Wednesday February 11, 2015 - 20:20:53 in Wararka by Super Admin
(Rating 3.0/5 Stars) Total Votes: 46
بسم الله الرحمن الرحيم وبعد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Allaah baa
بسم الله الرحمن الرحيم وبعد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Allaah baa mahad leh. Ammaan iyo nabadgelyo Nabi Muxamed korkiisa ha ahaato!
Sannadkii 1963kii, markii dalalka la isku yiraahdo Bariga Afrika(East Africa), kana kooban saddexda dal ee kala ah Keenya, Tanzaaniya iyo Ugandha, ay xornimo beenaadka ka qaateen gumeysigii Ingiriiska, ayaa waxa madaxdii dalalkaas casumaad u fidiyey madaxweynihii dalka Maraykanka ee xilliggaas, John. F. Kennedy, maaddaama Maraykanku isu arkayey in uu isagu yahay kan bud-dhigaha u ah xornimo helidda dadyow badan oo gacanta gumeystihii Ingiriiska iyo Faransiiska ku hoos jiray. Casumaaddii loo fidiyey madaxda dalalkaas, waxa weheliyey, oo isna casummaaddii ka qeyb galay, Raiisal-wasaarihii dalka Soomaaliya, Cabdirashiid Cali Sharmaarke, Allaha u naxariistee. Sababta Soomaaliya loo casumay ayaa ahayd in xilliggaa Soomaaliya ahayd dal ay reer Galbeedku u arkaan in uu xaggooda u janjeero siyaasad ahaan, dawlad rayid ah, dadkuna soo doorteen ay dalka ka taliso.
Dalalkii casumaadda loo fidiyey madaxdoodii markii ay la kulmeen madaxweyne Kennedy, waxa uu hoggaamiye walba ku wargeliyey in uu weydiisto wixii kaalmo ah oo uu u baahan yihiin maaddaama ay yihiin dalal cusub oo u baahan in ay beesha caalamka la jaan-qaadaan. Hoggaamiye walbaa waxa uu weydiistey dawladda Maraykanka wixii uu markaa dan u arkayey. Raisal-wasaare Cabdirashiid waxa uu weydiistey Kennedy hub, sababta oo ah danta Soomaalidu waxa ay ahayd in ay hesho cudud ciidan oo ay kula dagaallanto dalalka Soomaaliya dhulalka ka haystaa, oo ay ugu horreyso Itoobiya, Keenya iyo xeebta Jabuuti, oo markaa gacanta gumeysiga Faransiiska ku hoos jirta.
Su’aasha markaa la isweydiin karo ayaa ahayd Soomaalidu hubkan yey kula dagaallamaysaa?
Jawaabta oo ah mid aan u baahneyn in meel fog laga raadiyo ayaa muujisey in hubka Cabdirishiid ka codsaday Kennedy uu khatar iyo dhibba ku yahay danaha Maraykanka ee Bariga Afrika, sababta oo ah Itoobiya, Keenya iyo Faransiisba waa garabka Maraykanka, kana mid ah xulufada reer Galbeedka ee hoos taga gaashaan-buurta NATO, dalalkaasina waa kuwo iyaga la ilaalinayo, sidaa darteed hubkaa uu Cbadirashiid ka codsaday Kennedy ma ahan mid uu Cabdirashiid heli karo ama loo oggolaan karo. Cabdirashiid oo lagu tilmaamo in uu ahaa nin waddiniyaddu ku dheer tahay ayaa dareemay in uusan hubkaa helayn, hadalse ka fakaday, waxa uuna u soo kicitimay dalka Masar, oo Jamaal Cabdinaasir marka horjooge ka ahaa, waxa ayna isla garteen in ay u jeestaan, jaalna ka raadiyaan xagga reer Bariga iyo xulafadii uu markaa hoggaaminayey Midowga Sofiyeeti.
Dad badan oo Soomaaliyeed, arrimaha xagga ciidammadana aad ugu xeeldheer ayaa aaminsan in ciidankii Soomaaliyeed ee mar Afrika ka sheegganaa uu ka dhismay xiriirkii Midowga Sofiyeeti iyo Soomaaliya ee lixdamaadkii bilowday. Haddaba qaddarkan yar ee taariikhda ah waxa aan u soo qaatay in aan is-bar-bar dhig ku sameeyo Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo kan uu dhalay ee Cumar la yiraahdo, taas oo u muuqata in Cabdirashiid ahaa nin rag ah, laakiin uu yahay Mas Abur dhalay. Noolaha Aburka la yiraahdana Soomaalidu waxa ay ku sheegtaa in uu yahay Mulac ama Bulacninba sida uu u yaqaan waxna aan dili karin, carruurtuna ku ciyaarto.
Dadka Soomaaliyeed ee dhaqanka miyiga aad u yaqaan ama miyiga ku garaadsaday waxa ay garanayaan in aqal Soomaaliga ama Buulka reerku leeyahay raartiisa ama gadaasha dambe ay ku xiran tahay Sellad ama Saab, kaas oo dumarku ay ku ritaan wixii qalab ah ee ka af beela sida Muduca, Madiisha iyo Maxaarka wax lagu tolo. Saabkaas markii loo baahdo ayaa gacanta la geliyaa oo laga baar-baaraa qalabkan aan xusay ee wax lagu tosho, waxaana Selladda laga helaa qalab waa hore lagu tuuray, sidaa darteed gaalo oo dhammi inta ay Selladahooda baareen ayey ini Cabdirashiid ka soo heleen, taas oo muujinaysa in ay Selladahoodii ka waayeen wax ina Cabdirashiid dhaama xaggooda, maaddaama uu markii labaad garoonka siyaasadda soo koray.
Allaha u naxariistee Cabdirashiid Cali Sharmaarke waxa ay isu maandhaafeen Kennedy, u dagaallanka dhulalka Soomaaliyeed ee maqan, gacanta cadowgana ku jira, laakiin Cumar oo ah ini Cabdirashiid waxa uu u heellan yahay in uu gumeysi geliyo intii uu aabbihii xornimada kaga tagay, iskaba daa in uu mid maqan xoreeyee. Haddaba akhristow miyaan la oran karin Cabdirashiid oo ahaa hoggaamiye aan gaaladu jecleyn ayaa dhalay Abur ama Mulac aan wax goyn ama aan macnaba lahayn. Runahaantii, Cabdirashiid iyo madaxdii kale ee Soomaaliya soo martayba laguma tilmaami karo niman xaqii Alle lahaa siiyey, oo jidkii Alle raacay dalkana ku hoggaamiyey wixii Alle ka raalliga ahaa, laakiinse waa kuwo dhaamay kuwa hadda nool ama jooga, marka xagga dadnimada iyo qiimaha qofka la tilmaamayo.
Daawo Sawirro:Macbadyo Ay Lahaayeen Shiicada Ciraaq oo Laburburiyay.